लियोनिद Agutin, अब प्रसिद्ध र प्रिय गायक, मा 16 जुलाई, 1968 मा मास्को मा जन्म भएको थियो। आमा, Lyudmila Leonidovna, त्यो प्राथमिक ग्रेड मा, एक साधारण माध्यमिक विद्यालयमा काम एक शिक्षक। बुबा, Nikolai, राम्रो संगीतकार, त्यो त लोकप्रिय "निलो गिटार" प्ले थियो, र पछि -। यस "गीत गाउने हृदय" मा
जीवनी Leonida Agutina प्रशंसक रोचक। यस लेखमा यो उल्लेखनीय मानिस कुरा हुनेछ।
Lenya जन्म हुँदा Agutin परिवार Leninsky Prospekt मा एक कम्युनल अपार्टमेन्ट मा, नीरस बगैचा बाट टाढा बस्थे। आमा अक्सर बच्चालाई वर्ष अघि चलाउन थाले आफ्नो खुट्टा संग फोहराहरू र pavilions बीचमा उनको छोरा संग हिंडे। आफ्ना छोराछोरीको क्लिनिक मा प्रवेश भएपछि, Ludmila एल, सडक मा ढोकामा एक ब्रान्ड नयाँ व्हीलचेयर बाँकी फिर्ता आए र यसलाई चोरी भएको थियो फेला परेन। "को खाली खुटा केटा" र स्वतन्त्र सार्न सुरु देखि। 1969 मा पहिले नै तिनीहरूले Belyaeva आफ्नै सहकारी घर Agutin क्षेत्र मा बसे।
सिक्न लियोनिद Agutin दुई विद्यालयमा सुरु: संगीत र सामान्य। निस्सन्देह, यो अक्सर उत्पन्न, अध्ययन संयोजन गर्न Lyudmila Leonidovna संघर्ष यो आधारमा सजिलो थियो। लियोनिद अझै पनि आफ्नो आमा को कौशलता र दृढता बारेमा कृतज्ञताले बिर्सनुहुन्न। मात्र धन्यवाद उनको बिन्ती गर्न उहाँले सफलतापूर्वक संगीत स्कूल स्नातक र संगीत संग आफ्नो धेरै मा फाले। पहिले नै एघार जवान संगीतकार आफ्नो पहिलो गीत "समुद्र", यो मनपर्ने लेखक त ल्याटिन अमेरिकी रूपांकनों सुनिन्थ्यो छ सिर्जना गरियो। स्कूल कम्पनी लियोनिद Agutin को प्राण थियो। उमेर छैनन् - आफ्नै पार्टी मा उहाँले पुरानो मान्छे निमन्त्रणा गरिएको थियो। बित्तिकै केटा पियानो मा बसे रूपमा उहाँले मित्र को एक भीड घेरिएको थियो। सबै पैदल यात्रा र extracurricular गतिविधिहरु मानिसको सहभागिता साथ आयोजित थिए।
रचनात्मक गतिविधि को शुरुवात
संस्कृति "Moskvorechie" को घर मा Kashirskoye - जीवनी Leonida Agutina, उमेर 14 मा संगीत स्कूल देखि स्नातक पछि, उहाँले एक ज्याज स्टूडियो, घर देखि टाढा स्थित धाउन थाले जब राउन्ड गरे। केटा मध्यरात पछि घर फर्के, तर पाठ वास्तविक खुशी ल्याए। एउटै अवधिमा Lenya पहिलो संगीत समूह को सदस्य भए।
यो दुर्घटना द्वारा भयो। क्लिनिक मा लाइन बसेर, त्यो तिनीहरूले किबोर्ड फेला पार्न सकेन भनेर गुनासो गर्ने अपरिचित मान्छे बीच कुराकानी overheard। सोचाइ बिना Agutin आफ्नो सेवा प्रस्ताव राखे। त्यसैले तिनले थियो जो guitarist Anton Loginov (अब पति मेरिना Khlebnikov) को टुकडी को "Credo", सदस्य भए।
धेरै Agutin लियोनिद रुचि हो: जीवनी, राष्ट्रियता, काम, व्यक्तिगत जीवन। तसर्थ, हामी कुरा गर्न जारी। 1985 मा, केटा सफलतापूर्वक उच्च विद्यालय स्नातक र संस्कृति को संस्थान मा भर्ना गर्ने निर्णय गरे। प्रतियोगिता प्रति ठाउँ 3.5 थियो। Agutin आफ्नो क्षमता मा ढुक्क थिए, र 16 अंक गोल गरेका थिए। दुर्भाग्यवश, आवेदक छैन नामांकन सूची मा आफ्नो नाम देख्न गर्नुभयो। आमा त्यो अवस्था स्पष्ट निर्णय र कलेज गए। फेयर को डीन को विशेषता चयन समिति मा परीक्षा क्षमता Agutin विनियोजन बताए। तर प्रतियोगिता बाहिर शीर्ष को क्रम म केही मान्छे भर्ना गर्न थियो, र यो गोल गर्ने विद्यार्थीहरूको केही भाग्य छाप एक बित्दै जाँदा ग्रेड। अन्त्यमा, डीन अझै पनि केही अवसर उपलब्ध स्थानमा भने, लियोनिद जम्मा हुनेछ भन्ने आशा दिनुभयो। एक चमत्कार भयो। Agutin चाहन्थे गर्दा काम प्राप्त गर्न, यसलाई तुरून्त कागजातहरू आवश्यक छ। उहाँले संस्थान तिनीहरूलाई पछि लागे। आफ्नो Gaze भाग्यमानी व्यक्तिहरूलाई द्वारा प्राप्त सूची संग अडान मा परे। लियोनिद मेरो आँखा विश्वास गर्न सकिएन। को टाँसियो पट्टी मा ठूलो अक्षर को एक पाना माथि यो आफ्नो नाम लेखिएको थियो।
सेना मा सेवा
आफ्नो विद्यार्थी वर्ष मा, मान्छे प्राय दृश्य मा देखा पर्नुभयो र धेरै गतिविधिमा भाग लिए। संगीत बनाउन, उहाँले त्यो एक चरण क्यारियर संग हात सधैं थियो छाडेनन्। अगाडी जीवनी Leonida Agutina के हो? भाग्य Kalevala मा फ्रंटियर मा संगीतकार फाले। लियोनिद को पहिलो वर्ष फैलाउन मन गर्दैन मा, जो सेवा यसलाई बुझ्न सक्छन्। जवान सिपाहीहरूले गर्दा धेरै कठिनाइ सहन थियो। सेवा को दोस्रो वर्षमा, लियोनिद को टुकडी कम्पनी अधिकारी को एक सदस्य थियो। अखबार मा यो टिप्पणी थियो। Agutin Leningrad मा सैन्य टुकडी को एक सदस्य बन्न निमन्त्रणा। Superiors अभिनेता अनुवाद आफ्नो लिङ्कमा थिएन, लीना पनि स्टेशन प्राप्त गर्न आफ्नै थियो। को सुविधाहरु बावजुद मान्छे अक्सर छुटेका छ, उहाँले आफ्नो नाकामा सम्झे र आफ्नो आमा लेखे। को मान्छे संग पुरानो ठाउँमा तिनीहरूले चाहन्थे के हृदय देखि प्ले। यहाँ यो केवल क्रम थियो।
केही समय पछि Agutin यो Suojärvi मा, अन्य थियो हुनत, सुदूर नाकामा फिर्ता पठाइएको थियो। कि कारण थियो। 1988 मा, मे मा, टुकडी मा लियोनिद Agutin मास्को मा कन्सर्ट गर्न आए। निस्सन्देह, उहाँले आफ्नो परिवार र साथीहरूलाई हेर्न चाहन्थे किनकी AWOL उम्कन छैन ताकि, प्रतिरोध गर्न गाह्रो थियो। टोलीमा उहाँले आफ्नो superiors गर्न घटना निन्दा, एक गुप्त सम्वाददाता फेला परेन। Dosluzhivat अवधि सैनिक अब Agutin एक निश्चित विडंबना संग सम्झन्छन् गायक छ के एक कम्पनी अधिकारी कुक, रूपमा Karelia मा नाकामा मा भएको थियो।
कलेज गर्न फिर्ती। पहिलो सांगीतिक सफलता
मास्को फर्केपछि मा दुई दिन पछि लियोनिद संस्थान मा आफ्नो पढाई जारी राखियो। जोसिलो उहाँले संगीत composes त्यतिबेला अध्ययन संगीतकार संग गीतहरू लेख्छन्। ठूलो चरण अस्थिर थिए मा तोड आशा। एक भाग्यमानी ब्रेक, र शायद भाग्य Agutin आफ्नो पहिलो गीत रेकर्ड मदत गरे। कलाकारहरूको एक गर्मी काम गर्ने मेरो आमाको मित्र, लियोनिद ध्वनि इन्जिनियर सम्पर्क मदत गरे। यो एक गीतको रेकर्डिङ 360 rubles खर्च हुनेछ भनेर बाहिर गरियो। राशि आफ्नो आमा एक महिना 180 rubles कमाएको भनेर दिइएको, धेरै थियो। तर अझै पनि पैसा जम्मा गर्न व्यवस्थित। पहिलो रेकर्ड गीत "समुद्र तसवीर।" थियो दुई हप्तापछि म थप दुई गीतहरू रेकर्ड गर्न सक्षम थियो। निर्देशक जवान, प्रतिभाशाली संगीतकार को काम मनपराएका, र उहाँले रेडियो तिनीहरूलाई धक्का गर्न मदत गरे। पहिलो पटक 1989 को गिरावट मा म जारी, मा आवाज Agutin सुने "शुभ प्रभात।" यो प्रारम्भिक सफलता प्रेरित पछि Agutin संगीत संसारमा ज्ञान बनाउन थाले।
जीवनी Leonida Agutina 1992 उज्ज्वल घटनाहरू replete छ। याल्टा गीत मा वार्षिक प्रतियोगिता मा "Barefoot केटा" को संगीतकार 1st ठाउँ ल्याए। एक Mischievous अनमोल भाग्य को यो छवि, उहाँले लियोनिद सँगसँगै धेरै वर्ष को लागि छ। उहाँले युवा प्रशंसक हजारौं एकैचोटि देखा।
3rd स्थान - 1993 मा Agutin Jurmala, उहाँले पनि विजेता बन्यो जहाँ मा प्रतियोगिता मा भाग। पछि, कार्यक्रम "संगीत परीक्षा" वर्ष को सबै भन्दा राम्रो संगीतकार रूपमा अभिनेता क्रिस्टल डिस्क पुरस्कृत गरियो। जनवरी 1994 मा, राजधानी गरेको पूर्ण घरमा "मेरिडियन" मा एक एकल कन्सर्ट Leonida Agutina आयोजित। तब देखि, आफ्नो सांगीतिक क्यारियर नाटकीय अप भएको छ, यो रूसी शो व्यापार मा धेरै लोकप्रिय भएको छ। लियोनिद इस्पात अक्सर प्रमुख संगीत, टिभी र रेडियो निमन्त्रणा। प्रसिद्ध एल्बम "Barefoot केटा" एउटै वर्ष मा जारी गरियो। 1995-1996 मा Agutin पहिले नै प्रमुख संगीत कम्पनीहरु, दुवै रूसी र विदेशी संग अनुबंध हस्ताक्षर गरे। "गर्मी वर्षा" र "Decameron": यो अवधिमा, यो थप दुई एल्बम जारी थियो।
धेरै वर्ष को लागि, लियोनिद Agutin प्रसिद्ध गायक Anzhelikoy Varum संग विवाह गरेर जडान। प्रारम्भिक 90 को दशक मा उहाँले पहिले नै विवाह भएको थियो, तर जोडी भङ्ग। 1994 Agutin को नर्तक Mariey Vorobevoy संग घनिष्ठ सम्बन्ध थियो पछि, विवाह पछि थिएन, तर 1997 मा आफ्नो सम्बन्ध फलस्वरूप, Pauline छोरी जन्मिएका थिए।
Angelika Varum र लियोनिद Agutin प्रदर्शन मा आफ्नो विशेष सम्बन्ध राख्न प्रयास गरेनन्, तर 1997 को वसन्त मा, सबै तिनीहरूलाई खुसी, प्रत्येक अन्य मा indifferent हालन नोटिस गर्न थाले। एक रचनात्मक संघ रूपमा आफ्नो सम्बन्ध थाले। एक छोरा-मा "bosonogo केटा" Angelica पिता कथित छैन र उनीहरूको सम्बन्ध मा हँसे। 1997 मा, जोडी जो उल्लेखनीय क्लिप खिच्नुभयो थियो गीत "रानी", गाँसिएको। पछि लियोनिद आगामी एल्बम Varum आधार भए धेरै हिट लेखे। 1998 मा, तिनीहरूले एक विवाहित जोडी (Shtirlitsa र पत्नी) प्ले "मुख्य-3 बारेमा पुरानो गीतहरू।" जुलाई 2000 मा, Angelica र लियोनिद, भेनिस मा आयोजित थियो जो उत्सव को विवाह। धेरै वर्ष को लागि, प्रशंसक दुनिया Anzheliki Varum रूपमा खुसी Agutin आँखा रूपमा हेर्नुभयो। आफ्नो देखिन्छ र उज्ज्वल मुस्कान प्रेम चित्रण गर्ने तस्बिर, कि प्रमाण हो।
1999 मा उहाँले आफ्नो छोरी एलिजाबेथ, अब आफ्नो हजुरबुबा संग मियामी मा बसोबास गर्ने थियो। त्यो आफ्नो दल लेख्छन् र गीतहरू कार्य संग, संगीत रुचि पनि छ। Polina र एलिजाबेथ - - गायक को छोरी राम्रो साथ प्राप्त, प्रत्येक अन्य कुराकानी।
चालीस पाँच दिन Agutina Leonida जन्मदिन Jurmala "नयाँ लहर" मा मनाइन्छ थियो। हल मा आफ्नो प्रतिभा, घनिष्ठ मित्र, नातेदार साँचो उपासकहरू भेला भए। कलाकार लामो यो छुट्टी लागि तयार छन्। सुनिन्थ्यो उनको प्रदर्शन मा चरण देखि, हिट Agutin नयाँ प्रबन्धमा प्रस्तुत। यो कन्सर्ट गायक को प्रिय पत्नी थियो, उनको मदत Valery Sjutkin। तिनीहरूले सँगै अभिनेता जीवन देखि विभिन्न रोचक एपिसोड सम्झे।
सबैलाई Agutin लियोनिद को जन्मदिन खुसी लाग्यो कि देख्न सक्थे। आखिर, उहाँले जीवनमा धेरै हासिल गर्न आफ्नो 45 वर्ष मा भएको थियो। तर, यो छैन अचम्मको, यो मायालु परिवार, एक आकर्षक पत्नी र समर्पित मित्र भर घेरिएको र समर्थित किनभने छ।
किन Sedakov छोडपत्र? जारी पक्ष
"Integral" समूह। सुरु
लोकप्रिय इटालियन प्रदर्शन गर्ने। गायक इटाली
समूह "केन्द्र": इतिहास र रोचक तथ्य
Gurgen Dabaghyan: जीवनी र Discography
अधिकतम अनुज्ञेय एकाग्रता (MPC) - वातावरण को एक महत्वपूर्ण सूचक
के र कसरी भाइरस लागि फाइल जाँच गर्न?
पर्दे भित्री फिरोजा। पर्दे को प्रकार
ओछ्यानमा मिसिन: समीक्षा, विधानसभा। मिसिन को रूप मा बेबी ओछ्यानमा
कसरी "Maynkraft" मा खेलाडी गर्न "उड" बनाउन: टोली
हड्डी मज्जा: पहेली शोधकर्ता पर्खिरहेका
मिति सम्म - यो सुन्दर छ। शब्दहरू अर्थ, प्रयोग उदाहरणहरू
योजना सेट विभिन्न रोगहरु मा leeches